AUKEY PA-F5 Minima PD Charger 20W Black and White *2Packs – Gadget Pro Myanmar
AUKEY PA-F5 Minima PD Charger 20W Black and White *2Packs
Product SKU: AUKEY PA-F52Packs
အဖြူတစ်တုံး အမည်းတစ်တုံး ကြိုက်ရာသုံး
AUKEYမှ မေ့တတ်လွန်းသူကြီးတို့အတွက် 20W PD Charger နှစ်ခုတွဲလေးရောက်ရှိလာပါပြီ။
AUKEY PA-F5က ဘာအားသာမလဲ။
အတုတွေပေါလွန်းတဲ့ခေတ်ကြီးမို့ APPLE Original ရှာဝယ်ရတာလည်း ခက်လွန်းလှပါတယ်။ ဒါကြောင့် Qualityကောင်းတဲ့ Third Party Brandကိုရွေးလိုက်တာက ပိုစိတ်ချမ်းသာရမယ်လေ။
AUKEY ရဲ့ PA-F5 Chargerလေးကတော့ နှစ်ခုတွဲကိုမှ Original Chargerတစ်တုံးရဲ့ ‌တန်ဖိုးတောင်မရှိတာမို့ တန်လွန်းလှပါတယ်။ Compactဖြစ်တဲ့ Sizeကြောင့်သွားလေရာ သယ်သွားဖို့လွယ်ကူပြီး ပလက်ပေါက်နေရာယူမှုလည်း သက်သာပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပလက်ပေါက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ 2Pinအမျိုးအစား Chargerလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
Third Partyမို့ စိတ်ချရရဲ့လား။
AUKEYရဲ့ Chargerတွေအကုန်လုံးက AUKEYရဲ့ အဆင့်မြင့် နည်းပညာဖြစ်တဲ့ Entire Protect Technologyကို အသုံးပြုထားပါတယ်။
တွဲဖက်အသုံးပြုမယ့် Deviceကို Ovet Heating, Over Current, Over Chargingမဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် MFi Certified Cableနဲ့သာတွဲသုံး စိတ်ချရပြီးသားပဲ။
【20W High-Speed Power Delivery】 Equipped witha20W USB-C Power Delivery port to offer fast, efficient charging at home, in the office, or on the go.
【Space-Saving Design】 50% smaller than Apple’s own 20W iPhone charger, this powerful PD charger barely takes up any space in your bag, and won’t block other outlets.
【Safe & Reliable 】 These tiny chargers haveanumber of built-in safeguards that protect your devices against excessive current, overheating, and overcharging.
【Wide Compatibility】 Power Delivery 3.0 offers 3x faster charging forarange of devices including iPhone 13/13 Pro/13 Pro Max/12/12 Pro/12 Pro Max, MagSafe Duo, iPhone 11/11 Pro/XS/XR/X, iPad Pro, iPad Air, and more.
Model specifications: PA-F5
Input: AC 100–240 V, 50/60 Hz, 0.6 A.
USB-C output:5V3A /9V 2.22 A / 12 V 1.67 A (20 W power 3.0) |5V3A /9V2A / 12 V (Quick Charger 3.0)
Total power: 20 W max
Dimensions ofaproduct: 30.7 x 30.7 x 30.3 mm / 1.21 inches x 1.19 inches
2 x AUKEY PA-F5 20W PD Wall Charger(Black and White) , User Manual
AUKEYရဲ့ တရားဝင်အာမခံ (၁၈)လပါဝင်ပါတယ်။